Amụma nzuzo - "Usoro nduku" Magazin
Amụma nzuzo na-akọwa ọnọdụ na ebumnuche maka ịnakọta, chekwaa, chekwaa, nhazi na ikesa ozi gbasara ndị ọrụ potatosystem.ru akụ. Site na ịdenye aha na webụsaịtị potatosystem.ru, ị na-egosi na ị nabatara amụma nzuzo a ozugbo.
Nchịkọta na ojiji nke ozi nkeonwe
Ndị ọrụ na-enye potatosystem.ru ozi nkeonwe ha ruo n'ókè achọrọ. potatosystem.ru na-anakọta ozi nkeonwe n'aka ndị ọrụ na ndabere afọ ofufo. Onye ọrụ na-ekwenye na nkwenye nke data nkeonwe ya site na onye nhazi.
Ozi nkeonwe a rịọrọ gụnyere aha mbụ, aha ikpeazụ na adreesị ozi-e. N'ọnọdụ ụfọdụ, potatosystem.ru nwere ike ịrịọ ozi gbasara aha, ụdị ọrụ nke ụlọ ọrụ nke onye ọrụ na-arụ ọrụ, na ọnọdụ ya.
Ndị ọrụ nyere data nkeonwe na-akwado nkwenye ha maka ojiji ha iji mee ka ozi gbasara ngwaahịa na ọrụ ọhụrụ nke akwụkwọ akụkọ Potato System.
potatosystem.ru na-agba mbọ iwere usoro ezi uche dị na ya iji chebe ozi nkeonwe nke ndị ọrụ na mbibi, mgbagha ma ọ bụ mkpughe.
Nkpughe ozi enwetara ndị ọzọ
potatosystem.ru nwere ikike ịnyefe ozi nkeonwe gbasara onye ọrụ na ndị ọzọ ma ọ bụrụ na nke a chọrọ site na Russian, iwu mba ụwa na / ma ọ bụ ndị ọchịchị na-agbaso usoro iwu.
Ịnweta ozi nkeonwe yana mmelite ya
N'ikwekọ na Iwu Federal nke Russian Federation No. 152-FZ "Na Personal Data", a na-ewere ihe niile anakọtara, chekwaa na nhazi ozi gbasara ndị ọrụ dị ka amachibidoro ịnweta ozi, ma ọ bụrụ na iwu nke Russian Federation nyere ya. Onye ọrụ nwere ike ịrịọ ka ihichapụ, mezie ma ọ bụ nkwenye nke data onwe ya site na:
izipu arịrịọ site na e-mail nke akọwapụtara maka ndebanye aha onye ọrụ;
izipu akwụkwọ ozi na ụlọ ọrụ nchịkọta akụkọ nwere ihe akaebe iji mata onye ọrụ.
Saịtị ahụ nwere ike ịnwe njikọ na saịtị ndị ọzọ. potatosystem.ru abụghị maka ọdịnaya, ịdịmma ma ọ bụ amụma nchekwa nke saịtị ndị a. Akwụkwọ a (Amụma nzuzo) na-emetụta naanị ozi ezigara na saịtị ahụ.
Mgbanwe na amụma nzuzo
Nlekọta saịtị ahụ nwere ikike ịme mgbanwe ọ bụla dị mkpa na Amụma Nzuzo n'otu akụkụ. potatosystem.ru na-agba mbọ ịgwa ndị ọrụ na webụsaịtị potatosystem.ru maka mgbanwe echere na ọ dịkarịa ala ụbọchị 7 tupu ntinye ike nke mgbanwe ndị a. Site n'ịga n'ihu na-eji saịtị potatosystem.ru mgbe mgbanwe ndị ahụ malitere, onye ọrụ si otú ahụ gosi na ọ nabatara ha.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara ọkwa a, biko kpọtụrụ anyị na: 8 910 870 61 83 ma ọ bụ ziga ajụjụ gị: maksaevaov@agrotradesystem.ru